Kulamadii Xildhibaanada federalka iyo madaxda Puntland uga socday Garowe oo soo gaba-gaboobay. – Radio Daljir
Garowe, Mar 09 ? Waxaa soo gaba-gaboobay kulamo muddo dhawr maalmood ah qaaday oo ay wada lahaayeen mas?uuliyiinta sar sare ee dawladda Puntland iyo xildhibaanno ka socday dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo dhawaan Puntland soo gaaray.
Kulamadaan oo ahaa kuwo xasaasi ah ayaa looga wada hadlayey sii xoojinta xiriirka ka dhaxeeyey dawladda Puntland iyo midda federaalka, iyadoo la isla soo qaaday sidii meesha looga saari lahaa xoogaa madmadaw ah oo dhawaanahaan u dhaxeeyey Puntland iyo dawladda federaalka ah.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Puntland C/xakiin Axmed Guuleed, iyo qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo shir jaraa?id ku qabtay aqalka madaxtooyada ee magaalada Garoowe ayaa sheegey in ay is afgad buuxa ka gaareen dhammaan waxyaabihii ay isla soo qaadeen, ee ku aaddanaa xoojinta xiriirka labada dawladood.
Wasiirku, waxaa uu xusay xildhibaannadaani in ay ahaayeen kuwo ka soo jeeda deegaannada Puntland, isla markaana ay halkaan u yimaadeen sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa Puntland iyo dawladda federaalka, taas oo uu tilmaamay ahmiyad weyn in ay u leedahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed.
Dhawr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale deegaannada Puntland waxaa u yimid mas?uuliyiin kala duwan oo ka socotay dawladda federaalka, kuwaasi oo inta badan isku hawli jiray sidii Puntland iyo dawladda federaalka iskaga kaashan lahaayeen arrimo badan oo iskugu jira xagga dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo sidoo kale xiriirka wada shaqayneed.
Imaanshaha xildhibaanadda dawladda federaalka iyo kulamada ay la yeesheen madaxda Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu danbeeyey uu liitay is fahanka iyo xiriirka dawladda Puntland iyo midda federaalka dhaxyaalla, waxaana haatan la filayaa in wax badan iska badalaan arrintaas.